Nzvimbo yeWWE Survivor Series yakaratidzwa - Mishumo - Wwe
Nzvimbo yakarongwa yeWWE Survivor Series yakaratidzwa - Mishumo
Vanopona Series ndeimwe yezviitiko zvikuru zveWWE zvegore. Ndiyo yechina uye yekupedzisira Big 4 pay-per-maonero egore, inoitika munaNovember. Survivor Series yakambotambirwa nenhandare nenzvimbo dzinopa vanhu vazhinji kurongedza imba yese.
Nekudaro, yegore rapfuura Survivor Series yaive yakashata uye yakaitika muThunderdome isina vateveri varipo nekuda kwe COVID-19. Iye zvino vateveri pavakazodzoka, WWE inoronga kuve nemutambo mukuru munguva ino yechando.
Sekureva kwaAndrew Zarian, Sureve Series yegore rino ichaitika kuBarclays Center muBrooklyn, New York zvichienderana nezvirongwa zviripo. Nguva pfupi yapfuura, Zarian akaputsa nhau kuburikidza ne Twitter:
ronda rousey inotevera ufc kurwa
'Zvirongwa zvekufungidzira zveSurvivor Series nzvimbo iri Barclays Center muBrooklyn NY.' - Zarian akashuma
Zvirongwa zveTentative zveSurvivor Series nzvimbo iri Barclays Center muBrooklyn NY. pic.twitter.com/EtKlmmNHs9
- Andrew Zarian (@AndrewZarian) Chikunguru 22, 2021
Barclays Center yanga iri pamba kune akawanda makuru eWWE anoratidza munguva yakapfuura
Barclays Center yakagamuchira zvisingaverengeke zveWWE zvinoratidza munguva yakapfuura, kazhinji ichizadzwa kusvika pamuromo nevatambi vewrestling kubva kumagumo kusvika kumagumo. Nzvimbo yacho inogona kubata vanhu vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu pachiitiko chekurwa.
Chimwe chezviitiko zvinozivikanwa zveWWE zvakaitika paBarclays Center iSummerSlam 2018. Kuuya kwechiratidziro kwaive 16,169 uye vanhu vazhinji vaidziya kadhi rakarongedzwa.
Brock Lesnar vs. Kutonga kwevaRoma kweWWE Universal Championship yakakosha kuratidzira. Iyo kadhi zvakare yakaona Ronda Rousey kuhwina yake yekutanga WWE Vakadzi Championship mushure mekukunda Alexa Bliss.
Chapupu @WWeromanReigns uye @BrockLesnar dhonza zvese zvinomira mune ino yemusango Universal Title Match pa #SummerSlam 2018. ⤵️ https://t.co/Kavbc0ECgx
(Kutendeseka kwe @WWENetwork ) pic.twitter.com/MdwXfW58v3
- WWE (@WWE) Nyamavhuvhu 21, 2020
Tichifunga nezvemhepo uye simba rakaburitswa neBarclays Center, WWE inogona kunge iri kuvaka kadhi yakakosha yeSurvivor Series, iine zita hombe rinogona kudzoka munaNovember.
Iwe unofungei nezveBarclays Center inotora Yakapona Series gore rino? Goverana pfungwa dzako muchikamu chemashoko pazasi.
sei kukuvadza chaizvo narcissist
vari rusev na lana vachiri vakaroora
zvinorevei kuve intuitive
unoitei kana wako akashata
ko wrestlemania 34 ichaitirwa kupi